छिमेकीको जातै वैगुनी ! | khabarsamaya.com
छिमेकीको जातै वैगुनी !
Monday, November 18th, 2019, 8:40 am
खबर समय व्यंग्य
दशगजामा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादती लगातारजसो समचारका शीर्षक बनिरहेका थिए । आफ्नो दैनिकी चलाउन पैसा तिरेर सामान नेपाली भन्सारमा प्रवेश गराउनु अगावै एसएसबीको दुब्र्यबहार सीनानका नगरिकले भोग्दै आएको कुरा हो । कतिपय सीमानाको बस्तीमा भने सौहार्दपूर्ण व्यवहार नभएका होइनन् ।
२ नोभेम्बर २०१९ का दिन भारत सरकारले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । पकिस्तान स्थापना बखतदेखि नै विवादित जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत गरेपछि भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त नक्सामा भारतले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र समावेश गरेको छ ।
नक्सा सार्वजनिक भएको चार दिन पछि अर्थात् ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ती जारी र्गयो । विज्ञप्तीमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भन्दै एकपक्षीय नक्सांकन नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त व्यक्तिगत पहलमा सीमा विवादको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत पुगेको खबर बाहिरियो । सरकारी अधिकारीले आफू पदमा रहँदा प¥र्याप्त प्रमाण सहितको दस्तावेज ढुकुटीमा राखेको अन्तवार्ता पनि दिए । कानुन, सन्धी र प्रमाणका आधारमा सीमा विवादमा नेपाल बलियो रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
जब भारतले राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्‍यो, नागरिक स्तरबाट सरकारको आलोचना शुरु भयो राष्ट्रियताको विषयमा सरकार किन मौन ? सरकारको विज्ञप्ती पश्चात् विज्ञप्तीकै स्वरुपलाई लिएर आलोचना शुरु भयो । हस्ताक्षर मात्र भएको विज्ञप्तीमा हस्ताक्षरकर्ताको नाम र दर्जा नै उल्लेख छैन भनेर ।
भारतले सीमा मिचेको कुरा नौले रहेन । यो पटक भो लामो समयको भारतको बल मिच्याइ चिर्ने अवसर सकरकारसँग रहेको भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
सीमा अतिक्रमण गर्दै औपचारिक रुपमा नेपाली भु–भाग भारतमा गाभे पछि नेपालीको कन्सेरीको रौँ तात्न थाल्यो । बचे खुचेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहेन हाम्रो व्यस्तता अब राष्ट्रियताको लागि भयो । भारतको रवैया प्रति फेसबुकबाट स्टाटसको आन्दोलन शुरु भयो । ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ भनेर द्वन्द्धकालीन समयमा सार्वजनिक भित्ताहरुमा रातो मसिले लेखेको देखेकै हो । अहिले सीमाना मिच्दा नेपालीको रगत पनि भुलुक्का उम्लेको छ, देशको रक्षा गर्नको निम्ति ।
राजनीतिक दलहरुलाई मसला मिलेको छ अर्को चुनावको लागि राष्ट्रियताको पक्षमा लडेँ भन्न । तर, ‘छिमेकीको जातै वैगुनी’ । देशको छिमेकी होस् कि घर टोलको छिमेकी होस् । छिमेकीको ‘जातै तगडा’ । सीमा मिच्न सबै खप्पिस ! तपाईं छिमेकी म मेरो छिमेकी तपाईं, ‘उस्तै–उस्तै त हो नि नानी’ । हामी पनि सीमाना मिच्न खप्पिस नै छौँ । जग्गाको साँध पर पुर्‍याएर आफ्नोमा सीमाना बढाउने । गाउँमा भए खेतबारीको डिलमा घाँसका रुख रोप्ने । फलफूल आफू खाने छिमेकीलाई सेप पारिदिने । घाँस आफू काट्ने बोटको सेप छिमेकीलाई पारिदिने । शहरमा घरको कम्पाउण्ड भित्र बहु उपयोगी बोटका विरुवा सार्ने, उपयोग आफू गर्ने सेप छिमेकीलाई पारिदिने । हागाँबिँगा पात पतिङ्करले छिमेकीलाई फोहोर थोपरिदिने । छिमेकीको जातै वैगुनी ।
अब, डुलौँ सडक तिर । फुटपाथ कस्को ? पैदल यात्रुको । पैदल यात्रुको लागि तयार परिएकाले नामै पैदल मार्ग–फुटपाथ हो । फुटपाथमा बटुवा हिड्ने वातावरण नै छैन । फुटपाथ त फुटपाथसँगै सटरमा पसल गर्ने पसलेको हो । आफ्नो सटर सीधाको फुटपाथ सरसफाइ गर्‍यो, सामान फिँजायो, व्यापार थाल्यो । बटुवा त बाटो खोज्दै बरालिइरहने हो । यसो जाम पर्‍यो बाइकवाला पनि फुटपाथबाटै बाइक हुँइक्याउँछन् । बटुवालाई तर्साउँदै टाँटाँ र टीँटीँ गर्दै हुइँकिने हतारोमा हुन्छन् बाइकवाला । फुटपाथ त मिच्नै पर्‍यो ।
फुटपाथसँगै खोलिएको हुन्छ वर्कशप । आधा सडकसम्म तार तेस्र्याउँदै टायरमा हावा भर्न पुग्छन् । सवारी साधनको पार्टपुर्जा अछरल्ल पार्दै मर्मत गर्नै पर्‍यो । फुटपाथ त मिच्नै पर्‍यो । किलो ठोकिएजस्तै गरि घर बनाउनु पर्‍यो । बालुवा, गिट्टी, रड लगायतका समग्री पनि सडकमै त हो थुपार्ने । बटुवा त लाग्छन नि आधा सडकबाट हिँड्न । फुटपाथ त मिच्नै पर्‍यो ।
सानो तिनो व्यवशाय गर्नै पर्‍यो पर्‍यो । सरकारी निकाय रिझाएर हुन्छ कि झुक्याएर हुन्छ गाडामा व्यापार त गर्नै पर्‍यो । गाडा पनि फुटपाथमै राख्ने हो नि । उपभोत्तालाई ठाँउ दिनैपर्‍यो । बटुवा त लाग्छन नि आधा सडकबाट हिँड्न । फुटपाथ त मिच्नै पर्‍यो ।
सिहदरवार पस्ने र शहरमा बस्नेले बालुवाटार मिचे । टार सके अब बालुवा बाँकी । खुल्ला मञ्च पनि चारतिरबाट चेपियो, खुला ठाँउ रहेन मञ्चको अस्थिपञ्जर बाँकी ।
मिच्ने काममा तपाईँ मैले पनि धेरै उपद्रो गरेका छौँ । अनैतिक काम गरेर नैतिकताको सीमा मिचेका हौँला, भो ! कुरै नगरौँ । सीमा मिचिएको आवाज भने झनै शसत्त पारौँ ।